Safarka haweeney Afgaanistaan ​​ah oo ka socota geeska hore ee safka hore: la kulan wacyigeliyaha bulshada - Equal Access International
Muddo dheer, Zahra Mosaiby waxay moodeysay in isbadalku ka baxsan yahay iyada. Isbeddel, wuxuu ku jiray gacanta dowladda, ama ragga, laakiin runtii ma uusan aheyn gabar saxafiyiinta ah ee reer Afghanistan. Laakiin waxaas oo dhan way is beddeleen ayay tidhi, markay soo baxday muddada, “Abaabule bulsho” oo ku jira aqoon isweydaarsiga EAI ee Herat.
Aqoon-is-weydaarsiga Xuquuqda Aadanaha ee Dulqaadashada, Mosaiby waxay ku baratay inay bilaabi karto inay xalliso dhibaatooyinka saameeya bulshadeeda. Kuwani ma ahayn inay noqdaan dhibaatooyin waaweyn. Waxay noqon karaan wax kasta oo ay si xoog ah dareentay. Hadana waxay ku bilawday wax yar, waxay go’aansatay inay nadiifiso kanaalka ku yaal tuuladeeda ku taal Herat ee ku jirtay qashin qubka, oo khatar caafimaad u keenaya dhallaanka iyo carruurta.
Markii ay ogaatay in qawaaniinta degmada aan la ixtiraamaynin, waxay ogaatay inay u baahan tahay la hadlida odayga tuulada. Laakiin iyada oo si fiican uga warqabta xaaladdeeda dhaqan ahaan haween ahaan, Mosaiby waxay ogtahay inaysan aqbali doonin inay toos ula hadlaan ragga sidaas darteedna waxay ka codsatay walaalkeed ka yar inuu abaabulo kulan uu la yeesho odayga tuulada. Kulankan ayay iyadu sumaddeeda ka dhigtay.
“Markii hore, odayga tuulada ayaa ka gaabsaday inuu waxka qabto laakiin markii aan idhi suxufiyad ahaan waa inaan ka warbixiyaa dhibaatooyinkaas, diyaar ayuu u yahay inuu la hadlo. Masaajidda iyo waddooyinka, iyo nadiifinta marin-biyoodka ayaa la abaabulay. "Boqol qoys ayaa ka qeyb qaatay hada," ayuu Mosaiby si sharaf leh u yiri, "waxay tan sameeyaan bil walba hal mar."
si loo xoojiyo haweenka inay hogaamiyaan isbadelka iyagoo abaabulaya bulshada.